Waa in aad in aad ogaato ka hor inta adeeganaya Hoverboard a - Jomo Technology Co., Ltd
Waa in aad in aad ogaato ka hor inta adeeganaya Hoverboard a
Iyada oo teknoolojiyad sare farsamo is miisaamid, steadiness double la tignoolaji dhisay-in oo shidma cuf, ay aad u fududahay in la xeeriyo, kaliya bedeli aad Murqo miisaanka wadnaha, aad mooto furfurmi hor gudbin doona, dib bay, bidix, midig, iyo xitaa soo jeedin 360 shahaadada ee bar. Mid ka mid ah feature ugu fiican ee mooto ay tani tahay oo aad ku xidhan tahay in la Bluetooth via app gacanta. Haddii ay taasi waa kiiska, waxaad u baahan tahay inaad doorateen wax soo saarka ugu fiican ee abid ka ma iman doonaan inay ku niyad jabin ku saabsan mowduuca ee ay qabtaan. Haddaba, ma aha in aad si isku dhibin saabsan batteriga. Koowheel hoverboard batari ahaayeen kuwo aad u cimri dheer, sida K3 isku dheelli mooto, nooca batteriga waa 18650 unugyada batari ku oolnimada sare, nolosha celcelis ahaan ahayd 1500 wareegyada.
Anigu ma aan ka xumahay adeeganaya Powerboard by Self Dheelitirka 2 Wheel Electric mooto xataa sida ugu dhakhsaha badan oo aan ugu faraxsanahay in ay aqbalin. The Self Dheelitirka mooto K3 la Is-Steadiness Board by KOOWHEEL leedahay wax badan oo dhan awoodda in ay ku boodaan badan jiirada kasta oo 18-degeee halkaas, iyo waxay ogolaan doonaa inaad si ay u gaaraan meelaha cusub isla markiiba. Riding ahaa raaxo leh, inkastoo aan dareemay sida caweyska fardaha waanan arki doonaa sida carruurta toy ah ka badan farsamo ee gaadiidka kale. Dheeraad ah ayaa aad dib ugu ama horey ugu Lulaa, xawaaraha sare ee mishiinka.
Waxaa wanaagsan a go'aan isticmaala da'da ah oo dhan. Waxaa laga yaabaa in aan la sida wax ku ool-gudbiyo sida 2 mootooyinka is-dheelli kor ku xusan si kastaba ha ahaatee ma lagu siri, ay tahay oo kaliya soo jiidasho badan ee wanaagsan. Koowheel K3 laba wheel mooto korontada isku-dheelli ayaa koraan in ay qalab lagama maarmaan ah in la sameeyo koox caafimaad u guurto si dhakhso ah ula kala duwan iyo tamar ku filan. Sidaas waxa ku Koowheel Electric mooto si gaar ah? Iyada oo dhammaan qaababka ay in aynu ka wada hadalnay oo qiimihiisa, waxa hubaal ah waa "tegi habboon haatan iyo waxa qabta" mooto. Tan waxaa laga yaabaa hal shay aad hadda in Christmas iyo fasaxyada ayaa maray in la yaabeen doonaa. Powerboard by Hoverboard waa kama dambaysta ah mooto is-dheelli laga yaabo in wax saaxiibtinimo lacagaha soo baxa la kala dooran karo oo aad u fiican in ay leeyihiin waayo-aragnimo ah erayga kama dambaysta ah ee fuushan la. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo caarada soo socda, xulashada mid ka mid ah ugu wanaagsan waa in ay ahaadaan cabbayso seeraha ..
Our is korontada mooto dheelitirka isticmaalaa tignoolaji si miyir ku xakameeyo xasiloonida. XSKK oo tamarta motor mataano ah, cusub Koowheel mooto korontada waxaa loo arkaa mid ka mid ah dhan-dhul ah "hoverboards" top suuqa gaadho xawaare max ee 8MPH iyo 20 degrees taag. Segway waa singlehandedly mas'uul ka popularization ee fikradda ah laba taayir leh, is-miisaamid, baabuurta korontada ku shaqeeya baytari.
waqti Post: Jan-19-2018